ဂွါအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (ILLC) ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဒါကြောင့်အများပြည်သူမှ၎င်း၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းချခွင့်မပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဂွါအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (ILLC) ကိုလည်းပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီအဖြစ်လူသိများသည်။
အဆိုပါ ILLC သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖျက်သိမ်းထိန်းညှိပေးသော 2007 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (လျှော့ "ဥပဒေ") တို့ကအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းကော်မရှင် (FSRC) ကိုအက်ဥပဒေနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုထိန်းညှိပေးသောအစိုးရအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။
ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါသေးငယ်တဲ့ကာရစ်ဘီယန်ကျွန်းစုများနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ (နောင် "ဂွါ") ဖြစ်ကြသည်။ က 350 အတွက်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်အထိဂွါနီးပါး 1981 နှစ်ပေါင်းဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်၏ဘုရင်စနစ်အောက်မှာနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနည်းကျပါလီမန်စနစ်ဖြစ်သည်။
တစ်ခုကဂွါအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (ILLC) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုငျ:
• စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ ILLC အတွက်အပြည့်အဝအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရှိရေးနိုင်ပါတယ်။
• အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်: အဆိုပါ ILLC နှင့်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းလူတိုင်းကသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: အဖွဲ့ဝင်များ ILLC ၏ကြွေးမြီများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားကနေတတိယပါတီများအနေဖြင့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုပျော်မွေ့။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ILLC ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနိုင်ငံခြားတရားရုံးတွင်တရားစီရင်ပိုင်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိမ်လည်လှည်စီးအနင်းတောင်းဆိုမှုများအနိုင်ရရန်ခက်ခဲကြသည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အဖွဲ့ဝင် '' အမည်များကိုအဘယ်သူအားမျှမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်
• လျှို့ဝှက်: တစ်ဦး ILLC ဆက်စပ်မည်သူမျှစီမံခန့်ခွဲမှုကနေတစ်ခုသို့မဟုတ်တရားရုံးအမိန့်ဖြင့်အခွင့်အာဏာမရှိဘဲအချင်းချင်းမဆိုသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။ အဆိုပါပြစ်ဒဏ်နှစ်နှစ်ထောင်ဒဏ်နှင့် / သို့မဟုတ်တစ် $ 50,000 EC အဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်။
• တဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်: တစ်ဦးတည်းသာအဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးတည်းသောမန်နေဂျာဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဟောင်းတစ်ဦးကဗြိတိသျှကိုလိုနီနယ်မြေအဖြစ်, အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဂွါအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (ILLC) အမည်
တစ်ဦး ILLC ၏နာမကိုစကားတို့ကို "လီမိတက်ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ် "လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်အတိုကောက် "LC" သို့မဟုတ် "LLC" သို့မဟုတ် "LLC" ပါဝင်ရပါမည်။
အဆိုပြုထားသောအမည်များ 120 ရက်ပေါင်းတဲ့ကာလများအတွက် FSRC နှင့်အတူ reserved နိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေဒါမှမဟုတ်မိဿဟာယတရားသဖြင့်စီရင်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဆောင်းပါးများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင် 18 အသက်ကျော်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိဒေဝါလီခံတော့မဟုတ်ပါဘူးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသံကသောကြေငြာပါဝင်သောအနေနဲ့လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်စွက်ရန်ငှားရမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကကြေငြာအဖွဲ့အစည်းများ၏ဆောင်းပါးများနှင့် FSRC နှင့်အတူဒါရိုက်တာ (များ) ၏မှတ်ပုံတင်ထားလိပ်စာနှင့်အသိပေးစာတစ်ခုအသိပေးစာနှင့်အတူတင်သွင်းသည်။
အဆိုပါ FSRC ထို့နောက်အဖွဲ့တစ်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအဖွဲ့၏ ILLC ရဲ့ဆောင်းပါးများတွင်ပါရှိသောရမည်ဖြစ်သည်
•ယင်း ILLC ရဲ့အမည်ကား,
အဖွဲ့ရဲ့ signor များ၏ဆောင်းပါးများ၏အမည်နှင့်လိပ်စာ•;
• အကယ်. မဟုတ်အစဉ်မပြတ်, စဲ၏နေ့စွဲ;
•အ ILLC ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်အားလုံးကန့်သတ်;
အဆိုပါ ILLC ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမရေသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအတွက် reserved လျှင်သူသည်နှင့်စပ်လျဉ်းတစ်ဦးကကြေညာချက်•; နှင့်
အဖွဲ့များ၏ဆောင်းပါးများတိကျတဲ့တစ်သက်တာအဘို့ပဌနာမပြုလျှင် ILLC ရဲ့န့်အသတ်တစ်သက်တာအတူအစဉ်မပြတ်ဖြစ်ကြသည်။ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆန့်ကျင်စည်းမျဉ်းတစ်ခု ILLC လျှောက်ထားရမည်မဟုတ်။
တစ်ဦး ILLC နှင့်ဆက်စပ်မည်သူမျှမန်နေဂျာထံမှသို့မဟုတ်မည်သူမဆိုရန်တရားရုံးအမိန့်အားဖြင့်အခွင့်အာဏာမရှိဘဲမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်ဖော်နိုင်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ချိုးဖောက်နှစ်နှစ်ထောင်ဒဏ်နှင့် / သို့မဟုတ် $ 50,000 EC တစ်ဦးဒဏ်ငွေအပြစ်ပေးတဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်မှတ်ပုံတင်ရုံး၌တည်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူမရရှိနိုင်သည့် ILLC အပေါငျးတို့သအဖွဲ့ဝင်မှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည့်အချိန်တွင်မဆိုထိုအမှတ်တမ်းများစစ်ဆေးခြင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ILLC ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြွေးတွေ, liabilities နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာခံထိုက်ပေဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်သူမျှမအရာရှိမန်နေဂျာအဖွဲ့ဝင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး ILLC ၏ဝန်ထမ်းအဆိုပါကြွေးမြီ, liabilities, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး ILLC ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ထိုက်ကျင်းပနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏အပြုအမူသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုအတွက်တာဝန်ယူဆလျှင်သို့သော်အကြွေးတွေ, liabilities, ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကနိုင်ငံခြားတရားစီရင်ခြင်းကိုကြွေးရှင်က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်စား ILLC လွှဲပြောင်းအိမ်ခြံမြေသီးခြားကြွေးရှင်ဖိနှိပျဖို့တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူပြုလေ၏ကြောင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်သက်သေပြရပါမည်။ ထို့အပြင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလွှဲပြောင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောဖြစ်လာခဲ့သည်အောင်များအတွက်တရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်တင်ဆက်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
ဆန့်ကျင်ပေါ်မဆိုစာချုပ်သို့မဟုတ်ဥပဒေအရပျက်ကွက်တစ်ခု ILLC မဆိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သို့မဟုတ်မန်နေဂျာကဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိသည့်နိုင်ငံခြားတရားရုံးစီရင်ချက်ဂွါတရားရုံးများကအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ဦးဂွါတရားရုံးထံမှရရှိသောတရားစီရင်ပိုင်နှင့်အမိန့်သာလျှင်ပြဌာန်းပါလိမ့်မည်။
တဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးအနေနဲ့ ILLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားများဖြစ်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
မူရင်းအဖွဲ့ဝင်များ ILLC ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အခါကနဦးလုပ်ငန်းလည်ပတ်သဘောတူညီချက်အတွက်အမည်ရှိနေကြသည်။ အပိုဆောင်းအဖွဲ့ဝင်များလည်ပတ်မှုသဘောတူညီချက်အတွက်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
အဖွဲ့ဝင်များတစ်ခုထက် ပို. လူတန်းစားနှင့်အတူသို့မဟုတ်အခွင့်အရေးများနှင့်အခြားကန့်သတ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်မဲပေးစရာမလိုဘဲလည်ပတ်မှုသဘောတူညီချက်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမအတန်းသတ်မှတ်ထားသောနေတယ်ဆိုရင်, အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များတန်းတူလုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အခွင့်အရေးများကိုရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များကရေးသားထားသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်သဘောတူညီချက်ချမှတ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအားလုံးအဖွဲ့ဝင်သဘောတူခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်အားလုံးကိုမန်နေဂျာအားဖြင့်ဖြစ်စေ, လုပ်ငန်းလည်ပတ်သဘောတူညီချက်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်မန်နေဂျာတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အများစုရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
၎င်း operating သဘောတူညီချက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအားလုံးမန်နေဂျာနှင့် / သို့မဟုတ် non-လွှဲပြောင်းအဖွဲ့ဝင်ထံမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အကျိုးစီးပွားလွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။
အဖွဲ့ဝင်များရပ်စဲလည်ပတ်မှုသဘောတူညီချက်တွင်ထည့်သွင်းရပါမည်။ မပါဝင်လျှင်, ဥပဒအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူသာထုတ်ယူခွင့်ပြုပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်ထုကိုလည်းလည်ပတ်မှုသဘောတူညီချက်တွင်ထည့်သွင်းရပါမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသာရုပ်ပစ္စည်းဟာ operating သဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်ဘို့နှင်ထုတ်ခံရမည်အကြောင်း, သို့မဟုတ်သူ၏ပြစ်ဒဏ်မှာအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ထောင်ဒဏ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ် ILLC ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရေးရာနှင့် ပတ်သက်. လိမ်လည်အကငျြ့များတွင်ပါဝင်နေသည်တစ်ဦးရာဇဝတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားလျက်ရှိ၏ ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဟာ operating သဘောတူညီချက်ထဲမှာထွက် set သဘောတူညီချက်များ, ဆောင်ရွက်ချက်, ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်။
၎င်း operating သဘောတူညီချက်ပုံမှန်အားဖြင့် ILLC စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ပေးစွမ်းသည်။ ယင်း၏စီးပွားရေးကိုထွက်တင်ဆောင်လာသောတဲ့အခါမှာမန်နေဂျာများအတွက် ILLC များအတွက်အေးဂျင့်များထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ထုတ်ဖော်ရန်အခွင့်အာဏာသို့မဟုတ်ဂွါတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်မဟုတ်လျှင်မန်နေဂျာများအားလုံးအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတပါး, မန်နေဂျာများအစဉ်မပြတ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌လုံ့လဝီရိယပြုမူများနှင့်သာမန်သမ္မာသတိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူရပါမည်။
တစ်ဦး ILLC အောက်ပါအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်သည်:
•လက်ဆောင်ပေးမယ်, အိမ်ခြံမြေ, နှင့်အမွေဆက်ခံအခွန်;
•နိုင်ငံခြားငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်. ချိန်းထိန်းချုပ်မှု။
တစ်ခုကဂွါအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (ILLC) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်: 100% နိုင်ငံခြားအဖွဲ့ဝင်မျှအခွန်, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လျှို့ဝှက်ချက်များ, privacy ကို, တစ်ဦးတည်းသောမန်နေဂျာဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အင်္ဂလိပ်စာရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ်။